Bandhigga Biyaha 2020 & Iftiinka Dabaysha | Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward
Bandhigga Biyaha 2020 & Iftiinka Dabaysha
Bandhigga Biyaha & Nalka Dabaysha [Dhamaad]
Takashi Nakajima (farshaxan casri ah) ta Ota Ward Senzokuike Park Boat House ～
Haddii aad isku xiri kartid cirka iyo balliga, sawiro dabaysha dhexdooda ah, oo waxaad jeceshahay milicsiga iftiinka, hooska, iyo iftiinka la isugu gudbiyo.
Takashi Nakajima (farshaxan casri ah)
Waxaa rakibay Takashi Nakajima, oo ah farshaxan casri ah oo ku nool Ota Ward, oo laga dhisayo guriga doonta ee ku yaal Senzokuike Park, oo loo yaqaan inay tahay goob lagu nasto ee dadka deggan Ota Ward.Shaqada isku xireysa saqafka sare ee doonta iyo biyaha dusha sare ee balliga oo leh filim fidin hufan ayaa isku xiraya cirka iyo balliga, waxayna noqoneysaa aalad aan kaliya aqoonsaneyn isku-darka muuqaalka dhulka laakiin sidoo kale dib u aqoonsaneysa dhismayaasha, dadka, balliyo, ifafaale dabiici ah, iwm. Waxaan ku raaxeysanay muuqaalka cusub ee ka muuqday jardiinada.
Goobta: Ota Ward Senzokuike Park Boat House
Kulan: Sebtember 2 (Sabti) ​​-October 9th (Sun), sanadkii 9aad ee Reiwa
* Kalfadhiga waxaa loo qorsheeyay 10 Oktoobar, laakiin waxaa lagu kordhiyay hal toddobaad caannimadiisa darteed.
Waxaa soo saaray: Takashi Nakajima (farshaxan casri ah)
Wuxuu dhashay 1972.Ku nool Ota Ward. Ka qalin jabiyay Iskuulka Naqshadeynta Kuwasawa, Dugsiga Sare ee Sawirka ee 1994. 2001 Wuxuu ku noolaa Berlin, Jarmalka. Waxaa ku deeqay aasaaska horumarinta dhaqanka ee xuska Mizuken sanadihii 2014 iyo 2016. 2014 ART OSAKA 2014, JEUNE CREATION AWARD Grand Prize (Osaka). Sannadkii 2017, wuxuu ku soo bandhigay shaqooyinkiisa xaflado farshaxanno kala duwan iyo qolalka kala duwan, oo ay ka mid yihiin bandhigga Matxafka Farshaxanka & Maktabadda, Magaalada Ota (Degmada Gunma), "Bilowga sheekadu waa bilowga sheekada sawirrada iyo ereyada."
Ururka Washoku Iskuduwaha Iskuduwaha
Aqoon isweydaarsiga carruurta ee la xiriira "socodkii Hikari" [Dhammaad]
Waxaan socod socod ah ku galnay Senzokuike Park aniga iyo qoraa Takashi Nakajima iyo martida qoraha nalalka gaarka ah Ichikawadaira.Waxaan dhajinay sawiradeena ugu xiisaha badan ee ay caruurtu qaadaan inta aan ku dhex soconeyno jardiinada websaydhka.
Taariikhda iyo waqtiga: Sebtember 2th (Sat) iyo 9th (Sun) ee Reiwa 26 laga bilaabo 27:18 ilaa 30:19
Macallin: Takashi Nakajima (farshaxan casri ah), marti, Taira Ichikawa (farshaxanka nalalka gaarka ah)
Kaqeybgalayaasha: Ardayda dugsiga hoose iyo waalidkood
Toogasho (Lambarka 1-26): Ka qaybgalayaasha
Qorshaha 2020 video Kamata reactor